Posted by ညီနေမင်း on 10:03 PM with7comments
nevercry009@gmail.comးပထမကညီလေး..computer မှာ. သီချင်းဒေါင်းလောဒ့် မရှိလို့ ဆိုင်မှာ လုပ်ခိုင်းတာ..ဆိုင်က လူကပြော တယ်...ဆော့ဝဲထဲ့ပေးထားတယ်တဲ့... သူထဲ့ပေးတဲ့...ဆော့ဝဲက ဘယ်လိုမျိုးလဲ ညီလေးလဲမသိဘူး....ဒါပေမဲ့..ညီလေးသိချင်းဒေါင်းရတာတော်တော်လေး လွယ်ကူ တယ်... ညီလေးက ထင်တာကတော့ အဆင်ပြေ တယ်ပေါ့... ၁လကြာတော့...ဒေါင်းလို့မရတော့ဘူး...free download လဲမရတော့ ဘူးအကို...ဒေါင်းလိုက်ရင်...First name .....Last name...G mail...Serial number. တွေပဲတောင်းနေတယ် အကို...ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲ အကို...ဖြစ်နိုင်ရင်..ညီလေးကိုကူညီပါအုံး...အကို..သီချင်းဒေါင်းလော့လုပ်ချင်တာ...မရတော့ဘူးအကို...ကူညီပါအုံး.. ရရင်...ညီလေးကို..kooo.nevercry@gmail.com ကို . .မေး(လ်)ပို့ပေးပါ အကို.... အကိုပြန်ပို့မဲ့မေး(လ်)ကို.. ညီလေးစောင့်နေ ပါတယ်... သီချင်းဒေါင်းချင်လို့ပါ... ညီလေးရေ အစ်ကို by name နဲ့ ပို့တဲ့ဟာက အရမ်းနည်းပါတယ်. မဖြစ်မနေ ပို့သင့်တဲ့ အကြောင်း အရာဆိုရင်တော့ ပို့ပေးပါတယ်. အခုလိုမျိုးကတော့ ပို့စ်တင်ဖြစ်တာများပါတယ်. ဘာလို့လဲဆိုရင်. တစ်ယောက်တည်းကို မေးလ်ပို့ရတဲ့အချိန်ကို ၀ဘ်ဆိုက်မှာ တင်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ အစားထိုးလိုက်တာပါ. အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေသွားအောင်လို့ပါ. အရင်ကလည်းပဲ လုပ်နည်းကို တင်ပေးထားပါတယ်. အခုလည်း video ဖိုင်နဲ့တော့ မတင်ပေးလိုက်တော့ပါဘူး. microphone ပါမလာလို့ပါ.လုပ်နည်း (၁)"ctrl + alt + delete" ဒါမှမဟုတ် Task Bar ကို right click ထောက်ပြီး start Task manager ကို နှိပ်လိုက်ပါ.
ပြီးရင် process ကို ရွေးပြီးနှိပ်လိုက်ပါ. အဲ့အထဲမှာ IDMan.exe ဆိုတဲ့ ဖိုင်နာမည်ကို နှိပ်ပြီး end process ကိုနှိပ်လိုက်ပါ (or) အရင်တင်ထားတာကို uninstall လုပ်လိုက်လည်း ရပါတယ်. ပြီးတာနဲ့ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ထဲက idman609.exe ဖိုင်ကို double click နှိပ်ပြီး install လုပ်လိုက်ပါ. အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ တင်ပေးထားတဲ့ IDM.v6.xx.release.3-patch နာမည်နဲ့ဖိုင်ကို internet download manager ရဲ့ Location ထဲကို သွားပြီး paste လုပ်လိုက်ပါ. ပြီးရင် right click ထောက်ပြီး Run as administrator နဲ့ Run လိုက်ပြီး patch ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ. ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်. လုပ်နည်း (၂)ဒီပို့စ် ထဲက internet download manager ကို download လုပ်လိုက်ပါ။
Download IDM 6.09 built 2Ifile | Mediafire | Mirrorcreator
nay naingFebruary 19, 2012 at 6:35 PMflagsong လုပ်နည်းလေးပို့ပေးပါလားReplyDeleteFaithMarch 1, 2012 at 2:49 PMကိုညီနေမင်းရေ...IDM 6.09 built2ကိုဒေါင်းလိုက်တာ...IDM.v6.xx.release.3-patch နာမည်နဲ့ဖိုင်တော့မတွေ့ဘူး IDM.v6.xx.release.3-patch.exe ဘဲတွေ့တယ်...C:/programfiles/internetdownloadmanagerအောက်ကို သွားထည့်တာ ..copy /paste လဲမရပြန်ဘူးကူညီပါဦး အကိုReplyDeletethantzinMarch 2, 2012 at 8:08 AMရှပ်နေတာပဲအစ်ကိုရေဖြစ်နိုင်ရင်ရှင်းပြပေးပါအုံးပြန်ပီးနော်ချစ်ကိုကြီးReplyDeleteမိုးနက်သားလေးMarch 4, 2012 at 11:53 PMအကိုရေ ညီတော့တော်တော်လည်သွားတယ် လိုက်လုပ်ကြည့်တာမရသေးဘူး ။လေးစားလျှက် ။ReplyDeleteMay Thant ZinMarch 23, 2012 at 7:07 PMDear Ko Nyi Min,I have successfully installed IDM and its patch file via your link. But I can't download any file at all. Whenever I download, it showsStatus: ConnectionDownloaded:0bytesTime left: UnknownInternet connection in my place is very fast and I can watchamovie from www.burmeseclassic.com.I used IDM with 30 days trial version and it was also okay. I uninstalled the old IDM before installing your recommended IDM. I do appreciate any of your suggestion and help.If possible, I also want to know any software that can downloadamovie from www.burmeseclassic.com.Thanks in advance.ReplyDeleteMay Thant ZinMarch 24, 2012 at 5:26 PMDear Ko Nyi Nay Min,I can use it now. Please ignore my previous post.Thanks.ReplyDeleteကိုလူမင်းကြီးMarch 28, 2012 at 9:16 PMပထမ.. patch file ကိုအရင်ကလစ်ပေးလိုက် အဲဒီမှာ နာမည်တောင်းလိမ့်မယ်.. နာမည်မှာ nyinaymin ဒါမှမဟုတ်.. idm လို့ရေးလိုက်.. တစ်ခုမရ တစ်ခုပေါ့.. ပြီးရင် အိုကေ.. ကို ကလစ်ပေးလိုက်.. ရသွားရင် idm.exe file ကို run လိုက် .. ဒါဆို အိုကေမှာ ဆိုပြေနော်..ReplyDeleteAdd commentLoad more...
အင်တာနက်သုံးတိုင်း adobe product အားလုံး serial nu...
Ram 8 GB ထည့်ထားတာတောင် ဘာလို့ memory နည်းနေကြောင်...
လော့ချဖို့ folder lock 6.6.5 and serials
internet download manager 6.08.8 နှင့် movie ရှင်း...
Rounter setting ထဲ မ၀င်တတ်လို့ပါ.
CyberLink PowerDVD 12 (latest version)
gtalk တွင် zaw gyi font မပေါ်ခြင်း ပြဿနာအဖြစ်အများ...
Any Video Converter Ultimate v4.3.3 (latest versio...
K-Lite Codec Pack 820 (latest version)